Galmudug oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay rag ka tirsan Shabaabkii Puntland ka dagaalamay – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Maamulka Galmudug ayaa sheegay in koofurta Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ku qabteen 30 ka mid ah dagaalyahanadii ka tirsanaa Al-Shabaab ee Ciidamada Puntland kula dagaalamay deegaanka Garacad.
Wararka ayaa sheegaya in raggan ay isugu jireen qaar hubeysnaa iyo qaar aan hub wadan oo ku dhuumanayay xaafadaha magaalada Gaalkacyo.
Ciidamo fara badan oo ka tirsan Galmudug ayaa ku baxay deegaano ka tirsan Mudug oo la sheegay inay u soo firxadeen Al-Shabaabkii lagaga soo itaal roonaaday aagga Garacad iyo Togga Suuj.
Puntland ayaa shalay sheegtay in dagaalyahanadii ka tirsanaa Al-Shabaab ee ay kula dagaalamay duleedka Garacad ay galeen dhanka Galmudug.
14-kii bishii hore ayay aheyd markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo doonyo watay ay ka dageen xeebaha Garacad iyo Garmaal.